Haweenka gobolka Bari oo Ubax Tahliil u aqoonsaday gudoomiyaha saxda ah ee haweenka qaranka – Radio Daljir
Nofeembar 3, 2012 4:28 g 0
Bosaso, Nov 03 – Haweenka gobolka Bari ayaa taageeray doorashada gudoomiye cusub oo ay yeeshaan haweenka qaranka Soomaaliyeed, kaasi oo 27-kii bishaan lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Kulanka oo ay soo abaabuleen ururka haweenka gobolka Bari ayaa lagu muujiyay haweenku inay ku qanacsanyihiin doorashadii Ubax Tahliil Warsame ee loogu doortay gudoomiyaha haweenka qaranka Soomaaliyeed.
Gudoomiyaha haweenka gobolka Bari Maryan Guduudo oo ka hadashay kulanka ayaa sheegtay inay ku qanacsanyihiin doorashada Ubax Tahliil ayna u arkaan hogaan ku dhisan cadaalad ayna u rajeynayaan inay ku taageerto haweenka Soomaaliyeed dib u dhiska dalka iyo kaalintooda ilaalineed ee nabadda.
“Waxaan tahniyad u diraynaa anigoo ku hadlaya haweenka gobolka Bari heer dagmo, heer urur iyo heer gobol doorashada Ubax Tahliil Warsame” ayay tiri Maryan Guduudo gudoomiyaha haweenka goboka Bari.
Maryan Guduudo ayaa xustay inay diyaar u yihiih inay la shaqeeyaan gudoomiyaha cusub ee haweenka qaranka, iyadoo intaasi ku dartay Ubax Tahliil inay aqoon badan u leeyihiin inbadana kasoo shaqeysay ururrada haweenka ee dalka.
Gudoomiyaha haweenka degmada Bosaso Marwo Qadro Dhuungal ayaa iyaduna bogaadisay Ubax Tahliil Warsame, waxa ay tilmaantay inay xoojinayso taageerada gudoomiyaha cusub ee haweenka qaranka.
Haweenka qaranka Soomaaliyeed ayaa dhowaan ukala jabay laba garab, waxaana garab ka mid ah 29-kii bishan ay gudoomiye u doorteen Batuullo Sheekh Axmed Gaballe iyadoo laba dhinac midkasta uu sheeganayo inuu yahay gudoomiyaha sharciga xilkana ay u doorteen sida sharcigu yahay xubnaha golaha dhexe ee haweenka qaranka.
Gudoomiyihii hore ee ururka? haweenka Qaranka Soomaaliyed Caasho Geesdiir ayaa xilkaas isaga tagtay kadib dhaawac culus oo bishii Abriil 2012 ka soo gaaray qaraxii ka dhacay Tiyaatarka qaranka ee Muqdisho.
Photo by: Mohamed Madani